१२ चैत, काठमाडौं । छिमेकी राष्ट्र भारतका सीमावर्ती भागहरुमा कोरोना संक्रमण तीव्र भएको छ । यसको असर नेपालमा पनि साताभित्रै देखिन सक्छ । केही दिनयता मुलुकभित्र संक्रमितको संख्या पनि बढ्दो देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार आमजनतालाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले संक्रमण दर उच्च हुँदै गए लकडाउनसम्म हुनसक्ने संकेत गरेको छ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले संक्रमण दर उच्च भएमा लकडाउनसमेत हुन सक्ने भन्दै आमजनतालाई सतर्क हुन आग्रह गरेका छन् । ‘संक्रमण दर उच्च भए त्यसको चेन ब्रेन गर्न लकडाउन पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । अन्य अवस्थामा जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर नियमित काम जारी राख्नुपर्छ, उनले भने । उनले होली पर्व पनि सामाजिक दूरी कायम गरी मनाउन आग्रह गरे ।
भारतमा संक्रमण बढेका कारण नेपालले सतर्कता अपनाएको राष्ट्रिय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेलले बताए । भारतबाट आउने केही पोजेटिभ पनि देखिएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
वर्षाले प्रदूषणमा सुधार तर अझै अस्वस्थकर
असन्तुष्टलाई सम्मानजनक व्यवहार गरिन्छः नेम्वाङ
आइतबार थप एक हजार ६६९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका ग्राहकको खाता नम्बर परिवर्तन, कसरी थाहा पाउने नयाँ नम्बर ?
तनहुँका विभिन्न सामुदायिक वनमा भीषण आगलागी
२०७७ चैत्र २४ गते मङ्गलवार
मेगा बैंकले ल्यायो ‘मेगा अभिभावक बचत खाता’
रासायनिक मल राख्‍न नपाउँदा धानखेतीमा प्रकोप
एउटा हातमा राजनीति र अर्को हातमा उद्यम रोजगारीको झण्डा बोकौँ : मन्त्री ढुंगेल
रुरु जलविद्युत परियोजनाको सेयर रजिष्ट्रारमा एनआईबीएल एस क्यापिटल नियुक्त
गण्डकी प्रदेशकै उत्कृष्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जा छनौट
‘निजी क्षेत्र एक ढिक्का भएमात्र उद्योग व्यवसाय बलियो हुन्छ’
चैते दशैंमा गण्डकीमा सार्वजनिक विदा
उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकाल समूहको उम्मेदवारी दर्ता
भारतमा कोभिड-१९ संक्रमित ९५ लाख नाघे
भान्जाको हत्या गरेको आरोपमा महिला पक्राउ
आलोचना र सुझाव दिनेलाई शत्रुवत् व्यवहार गर्न हुँदैन: माधव नेपाल
यस्ता छन् प्रचण्ड-नेपाल समूहको बैठकका ९ एजेण्डा